नयाँ बर्षको पूर्वसन्धामा गायक जोहेबले ल्याए 'यो जीन्दगी' (भिडियोसहित)
२०७५ चैत्र ३० गते ०९:०८
काठमाडौं । गायक जोहेव मानन्धरले नयाँ बर्षको पूर्वसन्धामा आफ्नो नयाँ गीत 'यो जीन्दगी' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त गीतमा संगीत र शब्द समेत गायक स्वयम्कै रहेको छ । गीतको म्यूजिक भिडियोलाई समेत गायक मानन्धरले नै निर्देशन गरेका हुन् । उक्त गीतमा गायिका सुधा खड्काले गायक मानन्धरलाई साथ दिएकी छन् । भिडियोमा मोडल रचिता क्षेत्री र गायक मानन्धरको अभिनय देख्न सकिन्छ । यसअघि दिएको माया र साथ ... read more...
नेपाल आइडल रविको पहिलो गीत ‘मिठो बोलीले’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
२०७५ चैत्र २५ गते ०९:५५
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन २ का बिजेता गायक रवि ओडले आफ्नो पहिलो गीत ‘मिठो बोलीले’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । शनिबार युट्युबमा रिलिज गरिएको उक्त गीत ट्रेण्डिङमा माथि चढ्ने क्रममा रहेको छ । उक्त गीतको म्यूजिक भिडियोमा रवी ओड आफै र अलिसा राई लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । कृष्ण केसीको शब्द रचना रहेको उक्त गीतलाई हरि लम्सालले संगीत दिएका हुन् । भिडियोलाई सुप्रिम पराजुलीले सम्पादन गर ... read more...
काठमाडौँ । युवा साहित्यकार दिनेश घिमिरेको तेस्रो कविता कविता संङ्ग्रह ‘हिमाल मेरो देश’ को विमोचन गरिएको छ । दोस्रो क्रान्ति दिवस नेपाली साहित्यले आइतबार राजधानीमा गरेको क्रान्तिनक्षेत्र-२०७५ तथा बहुभाषिक कविगोष्ठी, रक्तदान, वातावरण तथा विज्ञान प्रदर्शनी एवम् साँस्कृतिक कार्यक्रममा उक्त कविता संङ्ग्रहको पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पा, प्रदेशसभा-३ का सांसद् रामेश्वर फुयाँल र साहित्यकार जगन् ... read more...
सातौं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव सुरु
२०७५ चैत्र २१ गते १९:१४
काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव–२०१९ बिहिबारदेखि राजधानीको कमलपोखरीस्थित रुसी सांस्कृतिक केन्द्रमा सुरु भएको छ । शुभसन्ध्या ब्यान्डको सांगीतिक प्रस्तुतीसँगै महोत्सव उद्घाटन गरिएको थियो । सुरुमा जर्मनका चलचित्रकर्मी जिम क्र्याप्ट र बेस्टियन फिस्चेरले निर्देशन गरेको ‘द मार्च अफ होप स्काई’ प्रदर्शन गरियो भने ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र आत्मसम्मानित आप्र ... read more...
सेढाईंको ‘अत्यन्त खुशीको खबर’ आयो
२०७५ चैत्र २० गते १७:५३
काठमाडौं । लेखक तथा आविष्कारक उत्तम सेढाईं (अमर दूरदर्शी) द्धारा लिखित ‘अत्यन्त खुशीको खवर’ नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ । नेपाल र विश्वले हालसम्म भोगिरहेको अनेकौं नकरात्मकता र बढ्दो दुरावस्थाबाट प्रताडित हरेक मानिसहरुका लागि यो पुस्तक फलदायी हुने लेखक सेढाईंले विश्वास लिएका छन् । सेढाईंको ‘अत्यन्त खुशीको खबर’ बुधवार एक कार्यक्रममाझ नेपाली काङग्रेसका नेता तथा प्रति ... read more...
काठमाडौं । गायिका अश्मी रिसालको 'मेरो माया जाँदै छौं' बोलको गीतको ब्ल्याक म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ब्ल्याक म्यूजिक अभियान प्रतिभाशाली गायक-गायिकाहरुलाई प्रोत्सोहन गर्नका लागि सुरु गरिएको अभियान हो । उक्त म्यूजिक भिडियो प्लाटफर्म नेपालबाट सार्वजनिक गरिएको हो । गीतको शब्द रचना विमला अधिकारीले गरेकी हुन् भने गीतको संगीत चर्चित युवा संगीतकार राजेशकुमार श्रेष्ठ गरेका हुन् । भिडियो: ... read more...
काठमाण्डौ । चलचित्र 'कालो वर्ष' को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । वैशाख १३ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको गीत वुधबार सार्वजनिक भएको हो । चलचित्रको निर्माण पक्षले ‘यस्तो साथी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा अन्जु पन्त र विशाल निरौलाले स्वर दिएका छन् । गीतको शब्द रचना खेम सारु मगरले गरेका हुन् भने संगीत पनि मगरकै रहेको छ । चलचित्रमा समावेश गीत प्रेममय छ । यसअघि निर्माण पक्षले चल ... read more...
काठमाडौं । गायिका मेचु धिमालको स्वरमा रहेको 'मायाको मौशम' गीतको नयाँ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा शब्द तथा संगीत राजेशकुमार श्रेष्ठको रहेको छ । सन्तोष प्रगढले एरेन्ज गरेको उक्त गीतको म्यूजिक भिडियोमा हेरुका लामा र जेनेलिया श्रेष्ठको अभिनय देख्न सकिन्छ । उक्त भिडियोलाई सम्पादन तथा निर्देशन क्रमश विष्णु खड्का र हेरुका लामाको रहेको छ । भिडियो: ... read more...
काठमाडौं । विगत १२ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका गायक राजीव लामाको नयाँ गीत कान्छी सुनन को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक राजिवले आफ्नै गाउँ-घर, भीर-पाखा, डाँडा-भञ्ज्याङ् र खोला-नालामासँगै हुर्केर माया प्रेम साटासाट गरिएको कान्छीलाई गीतमार्फत माया दर्साएका छन् । नेपाली ठेठ शब्दहरु राखेर सृजना गरिएको उक्त गीतको शब्द, संगीत र स्वर गायक राजीवकै रहेको छ । गीतमा बियट ब्यान्डका र्यापर थुजे दोन्दुप ... read more...
काठमाडौं । फिल्मी गीतभन्दा बाहिरको सर्वाधिक चर्चा बटुल्न सफल 'नाई मलाई था छैन' को रेकर्ड तोडिएको छ । त्यो पनि अरु कसैले नभई उनै चर्चित गायिका टीका प्रसाईंले आफ्नो पहिलो गीतको रेकर्ड पछिल्लो गीत अर्थात 'माया लुकी-लुकी' मार्फत तोडेकी हुन् । अहिले ननफिल्मी गीत अन्तर्गत सवैभन्दा बढि रुचाइएको गीत 'माया लुकी-लुकी' हुन सफल भएको छ भने अहिलेसम्म ५ करोडले बढिले हेरिसकेका छन् । 'माया लुकी-लुकी' गीत गायि ... read more...
काठमाडौं । केही दिनअघि गोविन्द फुयाँलको संगीत रहेको याँ गीत तिम्रै छेउ उनको आफ्नै युट्युव च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतको शब्द रचनाकार भोला ढुंगाना हुन् भने गीतमा गायक कर्मा ग्याल्चेन बमजनले दिएका छन् । नोर्बु शेर्पाले गीतको एरेन्ज गरेका हुन् । रमणीय स्थान मुस्ताङमा शुट गरिएको उक्त भिडियोलाई लामा भाइले खिचेका हुन् । बिक्रम दाहालको निर्देशनमा तयार भएको उक्त भडियोमा यान्छु तामाङ र नि ... read more...
काठमाडौँ । विभिन्न सञ्चारमाध्याममा आएका अन्तवार्तामा उनले खुलमखुला नै भन्ने गरेकी थिइन्-'एक रातको म यति लिन्छु, उति लिन्छु । त्यतिमात्र होइन, उनले मान्छे हेरेर ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छु पनि भनेकी छन् ।' त्यसै गरेर आम्दानी गरेकी उनले घरजग्गा पनि जोडेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ कि उनी को हुन् ? उनको धन्दा के हो ? र, उनले समाजका लागि कस्तो सेवा गरिरहेकी छन् । त्यसो त, यस ... read more...
काठमाडौं । डा.डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘प्रेममा पहिलो पाइला’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । शशि रावलको स्वर, सागर अधिकारी ‘शरद’ को सङ्गीत रहेको उक्त गीत डीआरको ‘सहेली’ एल्बममा रहेको छ । गीतको भिडियोलाई सुवाष प्रधानले निर्देशन गरेका हुन् । प्रेम लामाको छायाँकन, टेकेन्द्र शाहको सम्पादन रहेको गीतको भिडियोमा मनिषा सापकोटा र प्रकाश विकलाई फिचर्ड गरिएको छ । डीआर ... read more...
काठमाडौं । दिव्या राईको नयाँ एल्बम ‘परदेशी’ विमोचन गरिएको छ । उक्त एल्बमा नेपाली सांगीतिक आकाशमा बिल्कुलै नयाँ प्रस्तुति रहेको राईको भनाई छ । एल्बम विदेशिएका नेपालीहरुको पीडा र आफ्नो देशप्रतिको माया ओतप्रोत रहेको रचनाकार राईको भनाई छ । ‘बिदेश जाने रहर कसलाई हुन्छ र ? बाध्यताले हो देश छोड्ने’ बोलको उक्त गीतमा राईको एकल शब्द रचना रहेको छ । चन्द्रकान्त पौडेलको स्वर तथा संगित र ... read more...
काठमाडौं । साहित्यकार तथा गीतकार डा.डीआर उपाध्यायले केही समयअघि नेपाली एल्बम प्रकाशनमा एकैपटक सबैभन्दा धेरै एल्बम निकालेर नयाँ रेकर्ड राखेका थिए । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको हातबाट एकैपटक सात एल्बम विमोचन गरिएको थियो । यो विषयलाई सम्बोधन गर्दै उनलाई ‘एभरेष्ट वल्र्ड रेकर्ड’ को प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । डीआरका एक उपन्यास ‘दगाबाज’सहित एल्बम ‘जखम’, ‘माउ ... read more...
काठमाडौं । चर्चित गायक समिर आचार्यको नयाँ गीत 'सानोमा सानो' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतको शब्द र संगीत समेत गायक स्वयम्कै रहेको छ । म्यूजिक भिडियोमा चर्चित अनुहार राहुल शाह, अराज केसव र वेव एण्ड भाइभ समूहको उत्कृत्ट अभिनय देख्न सकिन्छ । उक्त गीतमार्फत हराउँदै गएको राष्ट्रप्रतिको माया दर्शाउन खोजिएको छ । चर्चामा रहेको उक्त गीत अहिले यूट्युव ट्रेण्डिङमा रहेको छ । यसअ ... read more...
काठमाडौं । भूकम्पमा श्रीमान गुमाएका विधुवा महिलाको वेदना समेटिएको मार्मिक गीत 'सिन्दुर' सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शब्द दिनेश पोखरेलको रहेको छ भने संगीत सुरेश गैरेको रहेको छ । उक्त गीतमा चर्चित गायिका मेलिना राईले स्वर दिएकी छन् भने गीतको संगीत संयोजन सुदीप सागरले गरेका हुन् । उत्सव दाहालले खिचेको उक्त म्यूजिक भिडियोमा बिनोद न्यौपाने र सम्पदा बाँनियाको अभिनय रहेको छ। भिडियोलाई बिकाश दाहालले सम् ... read more...
काठमाडौं । गायक प्रताप दास र सुमिना लो लामाको नयाँ गीत 'घामले जुनलाई' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतको शब्द र संगीत राजेशकुमार श्रेष्ठको रहेको छ भने गीतको संगीत संयोजन समेत उनैले गरेका हुन् । ओएसआर डिजिटलबाट सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोको निर्देशन सन्दीप भुजेलले गरेका हुन् भने सम्पादन प्रेम शर्मा पौडेलको रहेको छ । भिडियो: ... read more...
काठमाडौं । भारतीय चर्चित गायक सोनु निगमले महाशिवरात्रीको पूर्वसन्धामा नेपालमै छायाँकन गरिएको म्यूजिक भिडियो ‘शिव शंकरा’ सार्वजनिक भयो । गीतका मर्म र धर्म अनुसार भिडियो छायाँकन नभएको देखिन्छ । ‘शिव शंकरा’ भन्दै भगवान शिवको महिमा बर्णन गरिएको उक्त गीतको म्यूजिक भिडियोमा हिन्दुधर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर र वरपरको कुनै पनि दुश्य समावेश छैन । देवभुमिका रुपमा ... read more...
गायक संजीवको 'बादल' सार्वजनिक (भिडियोसहित)
२०७५ फागुन १८ गते ११:२३
काठमाडौं । करिव २ वर्षपछि गायक संजीव खरेलले फेरी आफ्नो नयाँ गीत 'बादल' लिएर स्रोता तथा दर्शकमाझ आएका छन् । उनले यसअघि 'मेरो मायामा' बोलको गीत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बादल बोलको नयाँ गीतमा उनको आफ्नै स्वर, शब्द र संगीत रहेको छ । गीतको संगीत संयोजन भने गोपाल रसाइलीले गरेका हुन् । उक्त गीतको भिडियोलाई बुद्ध लामाले छायाँकन र सुप्रिम पराजुलीले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोमा श्रेया कार्की र अनुराग ठकुरी ... read more...